Blockchain Izindaba 18.05.2018 - Blockchain Izindaba
Unionbank e Philippines ibonisa Bitcoin imishini ezimayini
Bitcoin uyaqhubeka ukuze zidonse ukunaka weemali. Ibhange elikhulu ePhilippines, Unionbank, Wethule yayo Bitcoin imishini ezimayini engqungqutheleni ibhizinisi.
Lokhu kuphawula ebhange lokuqala elikhulu yezimayini esidlangalaleni Bitcoin.
India sika Infosys ibambisana amabhange for blockchain ezisekelwe ukuhweba ezezimali inethiwekhi
Infosys ukuhlola ubuchwepheshe blockchain ukuletha ukusebenza ngekhono entsha ukudayisa ezezimali.
I blockchain ezisekelwe ukuhweba inethiwekhi lwakhiwe ukuthi kufakwe ekhompyutheni izinqubo ukuhweba ezezimali ibhizinisi futhi ihlanganisa izindawo ezifana ubunikazi ukuqinisekiswa, isitifiketi kwemibhalo kanye nezinkokhelo.
Ukuya phambili, iqembu ihlose ukwakha “oluphelele blockchain ecosystem, ngaleyo ndlela sibe nengxenye maqondana zokutholwa enkulu lobu buchwepheshe,” wathi Ajay Gupta, Imenenja jikelele omkhulu e-ICICI Bank.
Tel-Aviv stock exchange ukusebenzisa blockchain platform entsha obolekisayo
I-Tel Aviv Stock Exchange wenziwe teaming up Accenture futhi The Floor, Israel fintech Ihabhu, ukwakha blockchain izibambiso abolekise platform okuhloswe ukuvumela abolekise ngqo kuzo zonke kwezezimali.
Isiteji uyokwenza njengoba “eyodwa-stop wezitolo yonke imisebenzi izibambiso obolekisayo, evumela ukufinyelela emikhulu izibambiso amavolumu ngaphakathi emifushane isikhathi ozimele, ngisho nokuqhuba abasezikhundleni emifushane eside,” a press uthi.
Abanikazi yonkana Melika ozama ukuthengisa izigidi ezingu-dollar emizini yabo Bitcoin
Kulo nyaka esisuka kuwona, ...
Blockchain Izindaba 17.07.2018
Thumela Previous:Umuntu ukubikezela ukuziphatha ngesilinganiso cryptocurrency ngokuya ngenani ama-oda afakwe kanjani?
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 19.05.2018